Timo gaaban oo dhinacyada ka mid ah iyo mid dheer oo ragga ah | Ragga Stylish
Timo jarista ragga: Gaaban dhinacyada oo dheer dusha sare
Michael Serrano | | Daryeelka shaqsiyeed, Timaha
Ma jiro hal timo gaaban oo dhinacyada ah oo dheer xaga sare. Waxaa jira timo jarisyo kala duwan oo adeegsada fikradan qeexan, raaxada leh iyo fikirka lab..
Kuwa soo socdaa waa xulashooyinka ay tahay inaad tixgeliso Haddii aad rabto inaad si gaar ah u qeexdo marka xigta ee aad timajarahaaga weydiisato wax ka gaaban dhinacyada oo dheer dusha sare.
1 Timo jarista
1.1 Sidee loo sameeyaa?
1.2 Fursadaha timaha
2 Maxkamad militari
2.1 Sidee loo sameeyaa?
3.1 Sidee loo sameeyaa?
3.2 Fursadaha timaha
Waa timo gaaban oo ugu caansan dhinacyada oo dherer dheer xaga sare. Mana aha wax lala yaabo, maxaa yeelay faa'iidooyinkiisu ma yara.
Guud ahaan, timaha jar-jabka ah waxaa lagu bilaabaa iyadoo la jarayo dhinacyada oo la gaabiyo. Laga bilaabo lafta occipital, timaha intiisa kale ayaa si tartiib tartiib ah u sii dheeraanaya markaan kor u qaadno dhakada. Farqiga u dhexeeya aagagga goynta kala duwan waa inuu ahaadaa mid siman. Waxaa lagu samayn karaa maqas iyo timo jarayayaal labadaba.
Dayactirka waa in la sameeyaa 2-4 toddobaad kasta.
Haddii aad sharad ku sameysid timahan, waxaad haysataa ikhtiyaarro badan markii aad shanleyneyso kore:
Dabiiciyanimadu waa faa iidada ugu weyn ee timo jaban. Sidan oo kale, waa ikhtiyaar aad u fiican haddii, xirfaddaada awgeed ama doorbid shakhsiyeed, waxaad u baahan tahay timahaaga inaysan soo jiidan fiiro gaar ah intii loo baahdo.
Dhib malahan in tima jaraha fulintiisa aan qalad lahayn. Haddii timo jariddu aysan ku fiicnayn qaabka wejigaaga, ma jiraan wax la sameeyo. Dareenkan, fade waa khamaar aamin ah, tan iyo guud ahaan si fiican ayuu uga shaqeeyaa ragga oo dhan.
Waxay leedahay dabacsanaan weyn. Waad u habeyn kartaa inta ugu badan ee aad rabto, laga bilaabo dhererka (waa la gashan karaa labadaba mid aad u gaaban iyo ka dheer) illaa qaabka, iyada oo loo marayo dhererka wejigiisa.
Waxaa jira dad badan oo aan rabin inay u huraan ilbiriqsi ka badan kan sida adag daruuriga ugu ah timahooda, gaar ahaan subaxdii. Wehliyaha waa timo ku habboon arrintaan maxaa yeelay waxay qaadataa waqti yar in la dhaqo, la qalajiyo loona qaabeeyo qaabka la rabo.
Maxkamadda militariga waxay tixraaci kartaa dhowr maxkamadood. Halkan waxaan ku sharaxeynaa midka laga yaabo inuu ugu badan yahay adduunka militariga: ultrashort.
Timaha gaaban ee dhinacyada oo dheer dusha sare waa a barta dhexe ee u dhexeeya mohicada iyo madaxa la xiiray. Timo jaraha waxaa loo mariyaa tiro aad u yar (badanaa 0-0.5) ficil ahaan madaxa oo dhan.
Kaliya qayb yar oo ka mid ah qaybta sare ayaa hadhay iyada oo aan la jarin. Qeybtaan ayaa waxyar ka hartay inta kale, in kasta oo ay tahay in sidoo kale la gaabiyo. Waad hagaajin kartaa clipper-ka inta udhaxeysa 1 iyo 5 iyadoo kuxiran dookhaaga shaqsiyeed.
Wehliyaha waa ikhtiyaari, laakiin waxa aan gorgortan laga geli karin waa dhererka dhinacyada. Si loo helo qaabkeeda astaamo khadka macbudka wuxuu ubaahan yahay inuu aad sare u kaco, taas oo kala saarta labada aag.
Dayactirka waa in la sameeyaa 2-3 toddobaad kasta.
Joogitaanka milateri wuxuu waqti badan ku badbaadiyaa muraayada horteeda, maadaama aadan u baahnayn shanlo ama qalab hagaajiya. Waxay ka soo kacaysaa sariirta isla markiibana waxay diyaar u tahay inay banaanka u baxdo. Sidaa darteed waa timo aad u ficil ah.
Waa timo gaaban oo dhinacyada ah iyo mid dheer oo dusha sare ah oo inta badan xoojiya astaamaha wajiga. Haddii aad raadineyso raganimo iyo natiijo adag xaqiiqdii waa ikhtiyaar inaad tixgeliso.
Waa mid aad moodada. Sanadihii ugu dambeeyay, waxaa waday qaar ka mid ah jilayaasha ugu quruxda badan filimka iyo telefishanka, oo ay ku jiraan 'Peaky Blinders' ama Jon Hamm oo ku jira filimka 'Baby Driver'.
Sidii labadii hore, waxaad ku bilaabaysaa jarista nape-ka iyo dhinacyada mid gaagaaban ama aad u gaaban. Si kastaba ha noqotee, halkan waxaa la raadinayaa inuu jiro kala duwanaansho weyn oo u dhexeeya dhinacyada iyo dusha sare. Tan awgeed, qaybta sare ayaa looga tagay dhexdhexaad ama dheer.
Sida milatariga loo jaray, in lagu daro ama aan lagu darin gradient waxay kuxirantahay dookhaaga shaqsiyeed. Tixgeli haddii aad rabto inaad ku darto taabasho aad u hooseeya timo jaristaada.
Dayactirka waa in la sameeyaa 2-5 toddobaad kasta.
Gunta hoose ayaa sida caadiga ah dib loo shanleeyaa. Qaybta hore waxaa badanaa la siiyaa mug, inkasta oo aysan muhiim ahayn. Waxa kale oo aad dooran kartaa qaabab kale, sida kuwa soo socda:
Timo jarista si yaab leh ayuu ula shaqeeyaa garka. Haddii aad koray timaha wajiga, timahaani waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee aad bixin karto.
Sameynta qashin-hoose waa mid aad u fududqaasatan markii ugu horeysay, sida badanaa uma baahnid inaad korka aad u taabato. Waa ku filan tahay in loo gudbiyo timo jaraha dhinacyada iyo nafaqada qoorta lambarka la xushay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha » Timo jarista ragga: Gaaban dhinacyada oo dheer dusha sare